မင်္ဂလာပါ — MYSTERY ZILLION
May 2007 edited June 2007 in မိတ်ဆက်
ကျွန်တော့်နာမည် ရဲနောင်ပါ။ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်က လာပါတယ်။ ဒီက အက်ဒမင်ကြီး စေတန်ဂေါ့ နဲ့ ညီအစ်ကို အရင်းလိုဖြစ်နေတာရယ် ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေ လိုချင်လို့ရယ် ဒီကိုလာပါတယ်။ အားလုံးနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ပါတယ်။ :1:
ဟို.. နာနဲ့တိဒဲ့ ဂျီတော့ထဲမှာ အ၀ှါလင့်တွေတွေ ပေးပေးနေတဲ့.. ရဲနောင် :30: မုတ်ရား.. :4:
အားလုံးကို ချင်ခင်ပါသော.. တယ်ရင်း..:4:
ဟေ့ ဟေ့ .....ပေါက်တတ်ကရမပြောကြပါနဲ့ကွာ။ အကိုက ဂျီတော့ကို လိုအပ်မှ မေးလ်ပို့တာပါ။ ချမ်းသာပေးကြပါ။ နာမည်အပြည့်အစုံက ရဲနောင်လတ် ပါ။ မရောကြပါနဲ့ဗျာ။ :68:
ရေတယ်ဗျာ... ဘာဖြစ်ချင်သေးလဲ ..ချိတ်ချိုးနဲဲနော် .... ခင်ချင်လို့ပါ .
လမင်းပါ.....အဲ [email protected] တဲ့ မေးလ် က ...
ရော ရင်..........မသမာမှုနဲ့ ဖမ်းမှာပေါ့။ ခုလည်းအဲလို အရောင်တင်မှုန့်ထဲ လွှစာမှုန့်ရောတဲ့သူတွေကို ဖမ်းနေတာပဲ။ လာ.......လိုက်ခဲ့။ :24:
Ye` Naung wrote: »
ဖမ်းမဖမ်းတော့ မသိဘူး.. ရောသမမွှေကတော့ နာမည်ကြီးသွားတာပဲ...
ကျွန်တော်နာမည် စည်သူအောင်ပါ။ အားလုံးကို ခင်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ email address က [email protected] ပါ။ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာပိုင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားလုံးပါ၀င် ဆွေးနွေးကြစို့။ သူငယ်ချင်း တွေကိုလည်း ဒီ forum ကိုလာ ကြရန် ဖိတ်ခေါ်ပေးပါ။ မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်သွားအောင်လို့ပါ။
အနော်ကြောတဲ့ ရဲနောင်က ကြင်ဦးလွင်ကပါ.. ချောရီးနော်.. အတိုကြီး.. :4:
အားလုံးနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဗျာ . .
မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးရင်တော့ . . မသိတာလေးတွေမေးမှာနော် . . ဟီးဟီး . .:1:
...ကိုစေတန် ဘလော့ခ်မှာ ကို၇ဲ၂ကောင် အဲ...မှားလို့....ကိုရဲနောင် အကြောင်းဖတ်လိုက်ရတယ်...။..မိုက်တယ်ဂျာ.......စကားပြောတာ ပြတ်တယ်....။...မျောက် ကစကားကြောမတတ်၀ူးဂျ...။
...ကိုရဲနောင် နားသာနေရင်....ခဏခဏ ပိတ်ကန်ခံ၇ဘီး....နိဗါန် ကို လိပ်ပျံစီးပြီး တတ်တွားရမလားဘဲ..........ဟီးးး
မျောက်ရယ်.......ညီပြောကာမှ အကိုလည်း လူမိုက်ဖြစ်ပြီ။ စကားပြောတာ မိုက်တယ်ဆိုပဲ။ ဟား...ဟား....ဟား။ အကိုက ဒီလိုပဲပြောတတ်တယ်။ ခင်တတ်ပါတယ်။ အားလုံးသော ညီလေး ညီမလေးများကို ခင်မင်ပါတယ်။ လိုအပ်တာလဲပြောကြပါ။ အကိုက များသောအားဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေတတ်တယ်။ အဲတော့ ခဏလောက်ပဲ လာဖြစ်တတ်တယ်။ ဘာလိုလဲ ကြည့်တယ်။ လိုတာလုပ်ပေးပြီး အခြားလုပ်စရာလုပ်တယ်။ အဲတော့ နည်းနည်း သည်းခံကြပါ ချက်ချင်းစကားမပြန်တာကို။ စေတန်တော့ သိပါတယ် အကို အလုပ်ရှုပ်တာကို။ အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
ကိုရဲးနောင် မင်္ဂလာပါဗျာ. နည်းနည်းခြင်းသေားပညာပေးတာပဲး ကျွန်တော်တို့အတွက် အကျိုးရှိမယ့် ဟာတွေဖြစ်မှာဆိုတာသိပါတယ်ခင်ဗျာ.
မင်္ဂလာပါညီလေး။ အကိုက သိသလောက်ဖြန့်ေ၀ပေးတာပဲ။ ဖယောင်းတိုင်မီးဟာ သူများကို အလင်းပေးရင် မလျော့ပါဘူး။ အေးဆေးပါ။ အကိုကတော့ အဲလိုပဲနေတယ်။ သူများကို ပြောပြပေးရင်း အကိုပါ ပိုသိလာတယ်လေ။ ပညာဆိုတာ ဒါနပြုကောင်းပါတယ်။ အကိုလည်း ပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ ၀ါသနာရှင်ပါ။ သိသလောက်ပြောပြမှာပေါ့။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
မင်္ဂလာပါ ညီလေးရေ ဟဲဟဲညီလေးသာခေါ်ရတယ် ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးခေါ်ရမှာအားနာပါတယ်